I-FAQs-Yuyao Umzi mveliso weHlabathi wokuLwa noMlilo
UKUFUMANEKA KWEENKONZO ZOMLILO
UMJIKELELO WOMLILO WOMLILO NEKHABHINETHI
IVEKI YOMLILO EFANELEKILEYO
INTO YOKUCIMA UMLILO
Amaxabiso ethu anokutshintsha ngokuxhomekeke kubonelelo kunye nezinye izinto zentengiso. Siza kukuthumelela uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuba inkampani yakho isitsalele ngolwazi oluthe kratya.
Ngaba unayo ubuncinci beodolo?
Ewe sifuna zonke iiodolo zamanye amazwe ukuba zibe nobungakanani be-odolo encinci eqhubekayo. Ukuba ujonga ukuthengisa kodwa ngamanani amancinci kakhulu, sicebisa ukuba ujonge iwebhusayithi yethu
Ngaba unokunikezela ngamaxwebhu afanelekileyo?
Ewe sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iZatifikethi zoHlahlelo / ukuVumelana; I-inshurensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu okuthumela ngaphandle apho kufuneka khona.
Lithini ixesha eliphakathi lokukhokela?
Iisampulu, ixesha phambili malunga neentsuku ezisi-7. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo ayasebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wakho wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
Unokwenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki, i-Western Union okanye i-PayPal:
I-30% idiphozithi kwangaphambili, i-70% ibhalansi xa kuthelekiswa nekopi ye-B / L.
Siqinisekisa izinto zethu kunye nomsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwiimveliso zethu. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke
Ngaba uyakuqinisekisa ukuhanjiswa okukhuselekileyo nokukhuselekileyo kweemveliso?
Ewe, sihlala sisebenzisa umgangatho ophezulu wokupakisha ngaphandle. Sikwasebenzisa nokupakisha okuyingozi okukhethekileyo kwimpahla eyingozi kunye nokuqinisekiswa okugcina kubandayo bokuhambisa izinto ezinobushushu. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingaqhelekanga zinokubangela intlawulo eyongezelelweyo.
Njani malunga neefizi zokuhambisa?
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela okhetha ukuyifumana ngayo impahla. Ukucacisa yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa enexabiso kakhulu. Ngokuya elwandle sesona sisombululo sisiso semali enkulu. Ngokuchanekileyo amaxabiso ezinto sinokukunika kuphela ukuba siyazazi iinkcukacha zesixa, ubunzima kunye nendlela. Nceda unxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Ifektri yeYuyao yeHlabathi yezixhobo zokuLwa noMlilo